"म कसैलाई सिकाउन सक्दिन बरु उनीहरू स्वयं सोच्न प्रेरित गर्छु" - Subhay Post"म कसैलाई सिकाउन सक्दिन बरु उनीहरू स्वयं सोच्न प्रेरित गर्छु" - Subhay Post
“म कसैलाई सिकाउन सक्दिन बरु उनीहरू स्वयं सोच्न प्रेरित गर्छु”
सुभाय् संवाददाताFebruary 9, 2021 मा प्रकाशित (४ महिना अघि) अनुमानित पढ्ने समय : ३ मिनेट
सोक्रेटेस (ई.पू. ४७०–३९९) पश्चिमा दर्शनका अधिष्ठाता प्राचीन ग्रीक विद्वान चिन्तक हुन् । उनी (चित्रमा सेतो कपडा लगाएर औँला ठड्याइरहेका) मौलिक शिक्षा र आचारद्वारा उदाहरण दिन रुचि राख्दथे। सामान्य शिक्षा र मानवीय सदाचारमा जोड दिएर उनले रुढीवाद र अन्धविश्वासबिरुद्ध प्रहार गरे । मैले पहिलो पटक सोक्रेटेसको नाम सुनेको हाइस्कूलमा अँग्रेजी पढ्दा ‘फोर थिङ् स्’ मा उनको शिक्षाको प्रसंग आउँथ्यो ।
बुद्धले जस्तै सोक्रेटेसले पनि आफ्नो कुनै लिखित कृति छोडेनन् । तर बुद्धका चेलाहरूले उनका उपदेश कण्ठस्थ पार्न थालेका थिए । एरिस्टोटल, प्लेटोजस्ता सोक्रेटेसका वैचारिक उत्तराधिकारीहरूले आफ्ना कृति र संवादमा उल्लेख गरेका आधारमा उनका विचार हामीलाई थाहा हुने हो । यहाँ उल्लेखित वाणी प्लेटोको चर्चित पुस्तक गणराज्य (रिपब्लिक) मा ई.पू. ५०६ मा उल्लेख भएको आधारमा यहाँ राखियो ।
यिनलाई हावादारी विचार तथा बहस मन पर्दैनथ्यो । विवाहित र ३ छोराका पिता भए पनि एक फकिरको जस्तो यिनको जीवन थियो । उनको वैचारिक अभियानलाई प्लेटो र एरिस्टोटलले निरन्तरता दिए । युवाहरूलाई भड्काएको र देव निन्दा गरी नास्तिक विचार फैलाएको दोष लगाएर ‘हेमलक’ नामक विष खान दिएर उनको हत्या गरियो ।
सोक्रेटेस ढुङ्गा काट्ने पेशा गर्ने साफ्रानिस्कस र सुडेनी आमा फिनरितका छोराका रुपमा गरिब परिवारमा जन्मेका थिए । उनलाई मृत्युदण्ड दिँदा उनको मुद्दा पाँच सय जुरीको कचहरीले हेरेको थियो । तीमध्ये ३६१ जना ‘पञ्च भलाद्मी’ ले मात्र मृत्युदण्ड दिनुपर्ने मत दिएका थिए । झिनो मतको अन्तरले उनलाई विष पिलाइयो । उनले आफ्नो विचार त्यागेको वा एथेन्स् छोडेर जान राजि भएको भए सँजाय माफी हुनसक्थ्यो।
जेलभित्र विष पिलाएपछि सोक्रेटेस क्रमशः शिथिल हुँदै गए। अन्तिम वाक्यका रुपमा उनले आफ्ना चेला क्रिटोलाई अह्राएको भनाई थियो, “क्रिटो, हामीले एसलेपियसको कुखुराको भालेको दाम तिर्न बाँकी छ । त्यो तिरिदिनु ।” ७१ वर्षको उमेरमा घाम अस्ताउने बेलातिर उनको निधन भयो ।
उनका केही उत्कृष्ट विचार यस्ता छन्–
कोही मान्छेले अन्जानमै सत्य विचार लिएको अर्थ अन्धो मान्छेले ठीक बाटो लिएको जस्तै हो ।
गतिला मान्छेहरू बाँच्नका लागि खान–पिन गर्छन्, अगतिला मान्छेहरू खान–पिनका लागि बाँच्न चाहन्छन्।
म कसैलाई केही पनि सिकाउन सक्दिन । म उनीहरूलाई स्वयं सोच्न प्रेरित गर्छु ।
ताप्लय्‌या पश्चाताप !
नारायणी नदी इतिहासकै उच्च बिन्दुमा, पानीको सतह १०.४६ मिटरसम्म पुग्यो
मेलम्चीमा बाढी ,सात जनाको मृत्यु , दुइको शव फेला, अर्बाैँको नोक्सानी
बाढीले मेलम्चीको होटलभित्र थुनिएका दुई व्यक्तिको सेनाको हेलिकोप्टरद्वारा उद्दार
पासा छम्ह फ्वने !
कोभिड–१९ भाइरस पत्ता लाग्नुअघि वुहान प्रयोगशालामा सङ्क्रमण थिएन: चीन
ओलिको सरकारमा राजेन्द्र महतो उप-प्रधानमन्त्री बन्दै, नेकपा एमालेमा समेत चर्को विवाद !
कोरोना उपचार र आइसोलेसन व्यवस्थापन गरिरहेको ललितपुर महानगरले कोरोनाका कारण मृत्यु भएकालाई १ लाखको क्षतिपूर्ति दिने